GEMS Hidden In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel By tareenka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > GEMS Hidden In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel By tareenka
GEMS Hidden In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel By tareenka
(Last Updated On: 12/12/2019)
Dhammaan dalxiisayaasha ku riyoon ku saabsan booqashada dhagaxyo qarsoon oo ku dhex Europe iyo sidoo kale metropolises caan Yurub. photo A iyaga ka mid ah si farxad leh taagan soo socda inuu noobiyad Eiffel, Colosseum ama Big Ben ka dhigaysa qof kasta dareemo gaar ah (oo aan gebi ahaanba u hesho in!). Haddii aad tahay Instagram addict ama a "run" socotada, meelaha socday daafaha dunida waa wax walba!
ambaday agagaarka, sahaminta la garanayn ku, isku dayaya in ay la kulmaan dhaqamada cusub, iyo waayo-aragnimo wax ka duwan waa qurux. Taasi waa sababta safra dhabta ah ma aha cabsan madax off Jidka. Waxay jecel yihiin in ay joojiyaan by magaalooyinka in inta badan ma leeyihiin madaarada iyo ma sawiri martida badan. Kuwani dhagaxyo qarsoon oo ku dhex Europe marar aad u badan ku siin karaan sawir wanaagsan oo dal gaar ah Yurub ka badan wax kasta oo kale, faham oo run ah quruun. iyaga Booqashada tareen malaha waa habka ugu fiican ee ku raaxaysan cusub Bbc una Socon nolosha. Haddii aad tahay nin socoto ah, liiska this waxa loogu talagalay adiga.
Halkan waxaa ku GEMS aannu u jecel qarsoon ee Europe si fudud Ieexdo tareen in shaki ah oo ku kacaya maxaa yeelay, iyada oo aan.
FIIRO GAAR AH: Haddii aad ka fekereyso inaad u dhexeeya socday bas oo ay kasoo horjeeddo socday tareen – doorashada waa in mar walba tareen.
1. Saxony, ah ugu Koronto Mix of Nature iyo Taariikhda iyo dooqa koowaad for Hidden GEMS In Europe
Looma baahna in isla markiiba maskaxda naftaada odoroso in Dresden, run ahaantii. Dresden waa caasimadda ah ee Saxony, laakiin waxaa jira qaar ka mid ah qaybaha kale ee this gobolka Jarmal bari xusid mudan, sidoo kale. Just ka baxsan dhaw waa qalcaddayda Konigstein ah. Oo haddii aad ku raaxaysan socda, Waa in aad ka maqnaan buundooyinka stonework ee Saxony ah park Qaranka. Intaas waxaa sii dheer, aad u baahan tahay si ay u noqoto qof daacad ah naftaada. Way adag tahay in booqo Germany iyo, ugu yaraan hal mar, aan aad u badan oo ay leeyihiin qamri in qaar ka mid ah ulaha gudban. Nasiib wanaag, Saxony ayaa magaalada HBS yar oo lagu magacaabo Bad Schandau, fiican ee detoxing ka dib markii habeenkii sakhraan. Gluhwein waa in sidoo kale noqon on liiska tan iyo markii ay hoy u tahay suuqa ugu da'da weyn Christmas ee Germany. The network tareen Jarmal waa heer sare ee ku yaala goobahan si aad u hesho doonaa oo u kulmaan si ay si buuxda.
Frankfurt inay Tareenadu Dresden
Dortmund inay Tareenadu Dresden
Luxembourg in Tareenadu Dresden
Amsterdam si Tareenadu Dresden
2. Luxembourg City, Tiny a, Capital Romantic
Waxa ugu horeeya ee aad ka fikirto marka ay ka hadlayaan Luxembourg waa bangiyada. Wadankaas ayaa waxa uu si fiican u yaqaan si sax ah, sababtoo ah iyaga ka mid ah. Laakiin Luxembourg ayaa steepled kaniisadaha, guryo dhagax ah, iyo kanaalada yar dhigo booqashada badan ku riyaaqayaa badan aad ka filaneysaa. Taasi waa sababta meeshan waa mid ka mid ah dhagaxyo qarsoon dhif in Europe ka mid ah caasimadaha qaaradda this ee. Waa meel qurux badan, dhigay barta halkaas oo webiyaasha Petrusse iyo Alzette kulmaan. Waxaad booqan kartaa qaar ka mid ah maqaayadaha iyo baararka hip meel u dhow fagaaraha bartamaha. Intaa waxaa dheer, kabsarta Philippe II ayaa farabadan of dukaamada, si fiican diyaar u ah inay qaataan a, anagana yar aad noqon! dhammaantiisba Luxembourg waa meel fiican ee a taataabtay isbuucii.
Cologne si Tareenadu Luxembourg
Koblenz in Tareenadu Luxembourg
Metz in Tareenadu Luxembourg
Paris si ay Tareenadu Luxembourg
3. Antwerp: Diamonds, baaskiilada iyo Bi'ir More
Mid ka mid waqti dheeraad ah, ma run ahaantii jawharad qarsoon, laakiin ay ahayd in aan u xuso. Sababta waa mid fudud. Antwerp waa meel fiican si ay u joojiyaan by on your safarka tareenka ka Luxembourg Netherlands. Ka sokow, magaaladan badan in ay bixiyaan, oo waa inaad halkaas ku leeyihiin madadaalo. Haddii aad tahay dareen ku saabsan baaskiil iyo naqshadaha leedahay inaad ka yeelataan "safar naqshadaha." Thanks to this map qabow, aad awoodid ogaado warbixinta kooban ee magaalada foomka aad ugu jeceshahay gaadiidka. Oo haddii aad jeceshahay wax "shinier", tag hubi Antwerp Home of Diamonds. Isla mar ahaantaana, Belgium waa ku weyn yahay, waayo, kuwii ku caashaqi jiray biir. Haddii aad tahay mid ka mid ah, Korka bakeerigaagu ah ee "De Konick", warshad khamri magaalada Antwerp ee.
4. Camogli, a True Hidden GEMS in Europe
Kaliya 45 daqiiqo oo uu tareenku ka fog Genoa, this magaalada kalluumaysatada yar ma laha wax badan oo waajib-arkaa. Si kastaba ha ahaatee, badan sida kuwa ameelaha derrated in soo baxayso in dhagaxyo qarsoon oo run Europe, this mid aad u waa in aad liiska. Iyada oo guryaha ay midabo iyo jidadka uga yaacday, Camogli waa meel kaamil ah si ay u tagaan socod dheer. Socodka iyada oo Camogli, aad ka ogaan doonto hotels, malana, dhismayaasha qadiimka ah, iyo dubayaasha yar. Ka hor inta aadan u ogaado – waxaad u dhici doonaa jacayl meeshan la! Oo markay aad u hesho daalay marayay agagaarka, waxba ma jirto ka khayr badan isagoo qado in qaar ka mid ah maqaayadaha magaalada. waqti A kaamil ah si ay u booqdaan Camogli noqon lahaa May, inta lagu guda jiro kalluunka Dabaaldag. soo jiidashada ugu weyn ee ay dhacdo tani waa digsiga 28-ton ah. Waxa loo isticmaalaa, xaq aad u qiyaasay, kalluun karinta.
Florence si Tareenadu Camogli
Genoa inay Camogli Tareenadu
Rome si ay Tareenadu Camogli
Milan in ay Tareenadu Camogli
5. Weymouth, Town Beach ah in England ay xirto liiska Hidden GEMS In Europe our
Way adag tahay in la tixgeliyo mid ka mid ah dhagaxyo qarsoon ee Europe marka aad fossils xayawaan qiroweyn kuu dhow. Yup, xaq baad u akhridaa. fossils xayawaan qiroweyn waxaa laga heli karaa xeebta Jacka Weymouth. weli, ma dad badan ay go'aansadaan in ay qaataan 3-saac tareen kortaan ka London si ay u arkaan. Oo ah kuwa ka samayn ku raaxaysan karaan oo kala duwan watersports oo ay leeyihiin kalluunka iyo chips xeebta. Ama doorato hadhuudh ah qaar ka mid ah gastropubs ah. Tan iyo pound waa wax yar hoos xilligan, waa waqtiga saxda ah si ay u sameeyaan safar si England. Oo wakhtigii saxda ah ee booqanaya Weymouth noqon lahaa August inta lagu guda jiro Weymouth damaashaad.
Ma waxaan ka caawiyo go'aan oo meel ay u soo socda booqan on adventures aad soo socda? Good! Kuwani shan meelo waa uun tusaale ka mid ah sida ay wali jiraan qaar ay noqdaan Flop ogeyn iyo waxa la qariyey in Europe. dunida waa mid la yaab leh oo sugaya in aad u ogaado. Ku safrid tareen ku siin doonaa fursad ay ku arkaan, kuwaas oo meelo ka xagal ka duwan. Sidoo kale, aad safar dheeraad ah oo ku raaxaysan doonaa. Haddii aad u baahan tahay caawin qorshaynta safarka, ama aad rabto in aad ka iibsan tikidhada, fadlan nala soo booqdaan SaveATrain.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/hidden-gems-europe/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Camogli #hiddemgems #Saxony #Weymouth Antwerp europetrains europetravel Luxembourg Talooyin safarka tareenka